Kitra – «Orange pro league 2021»: hifampitana ny Five FC sy ny Jet Kintana | NewsMada
Kitra – «Orange pro league 2021»: hifampitana ny Five FC sy ny Jet Kintana
Par Taratra sur 16/01/2021
Hiditra amin’ny andro faharoa, amin’ity asabotsy 16 sy rahampitso alahady 17 janoary ity, ny fifaninanam-pirenena, taranja baolina kitra “Orange Pro League 2021”. Hangotraka avokoa ny fihaonana amin’izany.
Anisan’ny fihaonana hitana ny sain’ny besinimaro, indrindra fa ireo mpankafy ny baolina kitra, amin’ity faran’ny herinandro ity, ny andro faharoa amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Orange Pro League 2021”. Goavana amin’ireny ny fifandonan’ny Five FC Analamanga sy ny Jet Kintana Itasy, ho an’ny kaonferansy avaratra. Lalao hotanterahina eny amin’ny kianja By Pass, amin’ity asabotsy ity.
Adin’ny klioba samy mpandresy ireo. Hangotraka tokoa satria ho tsara toerana izay tafavoaka mpandresy. Sambany vao hifandona ny roa tonta satria ekipa sambany vao tonga eo amin’izao sehatra izao ny Five FC, izay niakatra avy any amin’ny D2. Nahavita dingana goavana satria nanintsana ny Fosa Jr Boeny, tao an-kianjany, nandritra ny andro voalohany.
Manana ireo mpilalao tanora sy kinga ary mahay.
Etsy ankilany, klioba ifangaroan’ireo mpilalao vaovao sy efa zatra ady kosa ny Jet Kintana. Hita ao amin’ity ekipan’Itasy ity ny be traikefa sy ny matanjaka. Nanaporofo izany ny nandavoany ny Tia Kitra Atsinanana.
Ankoatra izay, hifanehatra ihany koa ny Cosfa (Bebaoty) sy ny Fosa Jr Boeny. Fihaonan’ny samy resy kosa indray ny azy ireo. Hafana vay io lalao io satria ho ratsy toerana izay resy eo. Samy hiezaka hitady isa 3 avy ny roa tonta, amin’ity.
Ireo fandaharan-dalao andro faharoa
Asabotsy 16 janoary
Kianja Elgeco By-Pass
12:00 – Five FC vs Jet Kintana
02:30 – Cosfa vs Fosa Jr
Kianja Stadium Barikadimy
02:30 – Tia Kitra vs Elgeco Plus
12:00 – Uscafoot vs 3FB Toliara
02:30 – Ajesaia vs AS Adema
02:30 – Zanakala FC vs CS-DFC